Dowladda oo sheegtay in aysan jirin Ciidamo Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda oo sheegtay in aysan jirin Ciidamo Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya
Dowladda oo sheegtay in aysan jirin Ciidamo Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeyn uga timid qaar kamid ah Waalidiinta Soomaaliyeed, kuwaas oo sheegay in Carruurtooda tababar Ciidan loogu qaaday dalka Ereteriya laga dagaal geliyay dalka Itoobiya.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Cismaan Abukar dubbe ayaa sheegay in dhowr jeer Dowladda Soomaaliya ay soo gaartay wararka sheegaya in Dhalinyaradii tababarka loogu qaaday ereteriya ay ka qyeb galeen dagaalkii Ciidamada Itoobiya ay la galeen Kooxda TPLF, balse aan waxba ka jirin.
Wasiirka oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa qiray in dowladda ay dhalinyaro tababar ugu dirtay dalka Itoobiya, balse aysan jirin in laga qyeb geliyay dagaalkii ka dhacay Waqooyiga Itoobiya.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray Wasiirka in wararka sheegaya in ay dagaalka ka qeyb galeen dhalinyarada ay soo abaabuleen Siyaasiyiin xildoon ah, isaga oo si cad u sheegay in aysan jirin marnaba dagaal ay ka qeyb galeen Dhalinyarada dowladda Soomaaliya ay tababarka ugu dirtay Itoobiya.
Warkan kasoo yeeray dowladda Soomaliya ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Maanta Waaldiin sheegay in ay la’yihiin Carruurtooda oo tbabar loogu qaaday dalka Ereteriya ay dibadbax ka dhigeen Magaalada Muqdisho.
Previous articleSacuudiga iyo Imaaraadka oo wada-hadallo la furaya Iiraan
Next articleKenya oo fasaxday Diyaaridihii tegi jiray & kuwii uga imaan jiray Soomaaliya